Ukuhlolwa kwabafazi besifazane: Kuyini nokuthi kungani kubalulekile - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Ukuphuma Ezemidlalo Ezisindayo Izindaba, Wellness Inkampani, Izindaba Imfundo Yezempilo Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Ukuphila Kahle Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Umphakathi, Inkampani Izidakamizwa Vs. Umngani Ezempilo Umphakathi Imfundo Yezempilo, Izindaba
Main >> Imfundo Yezempilo >> Kuyini ukuhlolwa komuntu wesifazane omuhle nokuthi kungani kubalulekile
Kuyini ukuhlolwa komuntu wesifazane omuhle nokuthi kungani kubalulekile
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu esingayenza ukuphatha nokugcina impilo enhle ngokomzimba ukugcina konke lokho kuhlolwa okujwayelekile. Lokhu kusho ukuya kudokotela wamazinyo njalo ukuyohlanzwa, ukuthola ukuhlolwa kwesikhumba minyaka yonke ehhovisi lesikhumba sakho, ukubona udokotela wakho oyinhloko wokunakekelwa komzimba wakho wonyaka futhi, kwabesifazane, ukuthola ukuhlolwa kwabafazi abahle unyaka nonyaka.
ibiza malini i-adderall ngephilisi ngalinye
Kuyini ukuhlolwa komuntu wesifazane omuhle?
Ngenkathi ukuhlolwa ngokomzimba okujwayelekile kugxile kakhulu empilweni yonke , ukuhlolwa kwabesifazane kahle (okubizwa nangokuthi ukuhlolwa kwabesifazane) kuklanyelwe ukungangeni ezindabeni zezempilo eziqondene nempilo yokuzala yowesifazane. Ukuhlolwa kungenziwa ngumhlinzeki wokunakekelwa okuyisisekelo, udokotela wokubelethisa-udokotela wezifo zabesifazane, udokotela ongumhlengikazi wezempilo, umsizi kadokotela, noma umbelethisi ongumhlengikazi oqinisekisiwe (i-CNM ingumhlengikazi obhalisiwe othole isitifiketi sezinga lokuthweswa iziqu kokubelethisa; bavame ukusebenza emitholampilo eceleni kwe-OB-GYNs).
Noma yimuphi umeluleki okhetha ukumbona ekuhlolweni kowesifazane omuhle, kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi basesikhathini samanje imihlahlandlela yokuhlola nezincomo , ngoba lezi zinguquko njengoba kuphuma ucwaningo olusha, kusho uLexi Garbus, oyi-CNM enkambweni yangasese eDetroit.
Kwenzekani esivivinyweni sowesifazane okahle?
Ekuvakasheni kwakho kwabesifazane kahle, cishe uzothola ukuhlolwa komtholampilo, ukuhlolwa kwe-pelvic, kanye / noma a I-Pap smear, konke okwenzelwe ukusiza ukubona okungajwayelekile okudinga uphenyo olwengeziwe (isibonelo, iPap smears, ukuthola umdlavuza wesibeletho ). Umhlinzeki wakho uzophinde afune ukuxoxa ngobude nobuningi bezikhathi zakho, umlando wakho wezocansi nowokuzala, nokuthi ngabe uhlangabezana nanoma yiziphi izimpawu ezingavamile, njengezimpawu zesifuba, ubuhlungu, ukuphuma kwegazi okunzima, ukukhishwa kwesitho sangasese sowesifazane, noma ukulunywa. Ngokuya ngeminyaka yakho kanye nezidingo zakho, ukuhlolwa kuzobandakanya nokuhlolelwa izifo ezithathelwana ngocansi, ukuphathwa kwemithi yokugoma ( i-papillomavirus yomuntu umuthi wokugoma ikakhulukazi, yize eminye imitholampilo inikela ngemithi yokugoma eyengeziwe), kanye no ingxoxo mayelana nokulawulwa kokuzalwa nokuhlela umndeni .
Ezigulini esezifinyelele esikhathini sokuya esikhathini noma njengamanje zibhekene ne-perimenopause (eyaziwa nangokuthi ukuguquka kokuya esikhathini), ukuhlolwa kwabesifazane kahle kuzofaka ingxoxo yokuphathwa kwezimpawu nokwelashwa.
Abanye odokotela bafaka okunye ukuhlolwa kwezempilo ekuhlolweni kwabesifazane abakahle, njengokuhlolwa kwezempilo yengqondo, ukuhlolwa kwezidakamizwa notshwala, nokuhlolwa kwegazi ukuhlola ama-lipids namazinga kashukela egazini. Ekugcineni, umhlinzeki wakho uzokubuza ukuthi ngabe uzizwa uphephile yini ekhaya. Uma izivivinyo nokuhlolwa kuveza noma yini edinga ukulungiswa, umhlinzeki wakho uzokwakha uhlelo lokwelashwa, a-ode ukuhlolwa okwengeziwe (isibonelo, ukuhlolwa kwebele kungalandelwa nge-mammogram— noma ngabe awufuneki ngobuchwepheshe okukodwa ) noma ngikudlulisele komunye umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo.
Kunconywa kakhulu ukuthi [konke] lokhu kuhlolwa kufakwe, yize ukujula kokuhlolwa kuhluka, kusho uGarbus, echaza ukuthi ihhovisi ngalinye linezinqubomgomo nezinqubo zalo.
Ngalokho kusho, qaphela ukuthi ngenkathi izinhlangano zithanda i- I-American College of Physicians (ACP) kanye ne- I-American College of Obstetricians kanye neGynecologists (ACOG) ishicilela imihlahlandlela yokuhlola nezincomo zezinto ezifana ne-Pap smears kanye nezivivinyo ze-pelvic, abahlinzeki ngazinye bavame ukwenza izinqumo ngesidingo salezi nezinye izivivinyo ngokususelwa a) kokuhlangenwe nakho kwabo nemibono yabo kanye b) nezidingo zesiguli okukhulunywa ngaso , kuchaza UMary Jane Minkin, MD , uprofesa womtholampilo emnyangweni wezokubelethisa, izifo zabesifazane kanye nesayensi yokuzala eYale University School of Medicine.
Ngakho-ke, isibonelo, ngenkathi I-ACP ayisancomi izivivinyo ezivamile zokhalo lwabesifazane abangenazimpawu , abahlinzeki abaningi bacabanga ukuthi kuwukuhlakanipha ukuziphatha njengendlela yokuvimbela. Kuyisinqumo ngokuhlanganyela phakathi komhlinzeki nesiguli, kusho uDkt. Minkin, enezela ukuthi yena ubabheka njengengxenye ebalulekile yokuhlolwa ( njengoba kwenza i-ACOG ).
Ungasilungiselela kanjani isivivinyo sakho sowesifazane omuhle
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu owesifazane angayenza ukulungiselela ukuhlolwa kwabafazi abakahle ukuyithola ekhalendeni. Abahlinzeki abaningi balinde isikhathi eside, ikakhulukazi iziguli ezintsha, ngakho-ke qiniseka ukuthi ushayele umnyango wokuhlela isikhathi eside ngaphambi kokuthi ulungele ukuhlolwa kwakho. Uma nje ukuvakasha kwakho kuyinto ejwayelekile, lindela ukuchitha cishe ihora elilodwa emtholampilo.
Lapho usuku lokuqokwa kwakho lufika, uDkt Minkin uthi kubalulekile ukuvela nohlu lwemibuzo nokukhathazeka kwezempilo usulungile ukuze ungakhohlwa ukuletha noma yini ofuna ukuyixoxa. Ungathola futhi uhlu lokuhlola lwezempilo lokuphila eminyakeni ngayinye ku thulisomkhize.gov .
Noma yimuphi umbuzo onawo, wubhale phansi, usho kanjalo. Lokhu kungafaka imibuzo mayelana nezimpawu, imithi, ukuzala, ukukhulelwa okuzayo, noma uhlobo lokuqokwa uqobo.
Futhi ungakhathazeki ngokuthi ucabanga ukuthi umbuzo usifanele yini isikhathi sakho sedokodo. Ngemuva kwakho konke lokhu eyakho ukuqokwa, kusho uGarbus. Noma yimuphi umbuzo ngumdlalo olungile.
Umhlinzeki ngeke akwazi ukulindela yonke imibuzo, usho kanjalo. Ngakho-ke uma unombuzo noma umane nje unelukuluku lokungaqondakali, kufanele [uzizwe] ukhululekile ukubuza.
UDkt. Minkin uphinde ancoma ukuthi iziguli zikulungele ukuxoxa ngezindlela zazo zokulawula ukubeletha, uma kungenzeka kwenziwe izinguquko (uma uvame ukukhohlwa ukuphuza iphilisi lakho, ngokwesibonelo, kungaba yisikhathi esihle sokuzama okuhlukile, njenge-IUD ).
Umhlinzeki wakho uzoba nemibuzo nawe, futhi. Futhi yize ezinye zazo zizobonakala zingezomuntu uqobo (okusho imibuzo ephathelene nomsebenzi wakho wezocansi kanye nabalingani bakho), kubalulekile ukuthi uthembeke futhi uqonde ukuze ukwazi ukuthola ukuhlolwa nokunakekelwa okufanele.
Uma unovalo ngokuqokwa noma ufuna ukusekelwa kokuziphatha okuhle, kulungile ukuletha umuntu ekuqokweni kwakho (njengomlingani wakho noma umngane), kusho uGarbus.
ingabe i-benadryl yenza ifomula engezeli
Lokhu ngukuvakasha kwakho… futhi uma uzizwa ufuna ukuba nomunye umuntu (omunye) egumbini kanye nawe okuzokwenza uzizwe ukhululekile ngesikhathi sokubhala, unelungelo lokukucela lokho, usho kanjalo. Sihlala samukela noma yini esingayenza ukukusiza uzizwe uhileleke kakhulu.
Kodwa-ke, umhlinzeki usazodinga isikhathi sokuba yedwa nesiguli, kusho uGarbus noDkt. Minkin, ukuqinisekisa ukuthi izinto ezibucayi njenge udlame lomlingani osondelene naye noma isidingo sowesifazane osemusha sokulawulwa kokuzalwa unganakwa. Okushoyo kudokotela wakho kuyimfihlo, ngakho-ke kufanele uzizwe ukhululekile ukuvula.
Sidinga ukunika (iziguli) isikhathi sokuzizwa siphephile futhi sikhululekile ukusivulela isifuba, kusho uDkt Minkin.
Mayelana nesikhathi, ukuhlolwa kwabesifazane kahle kungenzeka cishe nganoma isiphi isikhathi kumjikelezo wakho wokuya esikhathini, kusho uDkt Minkin. Okuhlukile? Uma uhlangabezana nokukhishwa okungajwayelekile ukuhlolwa kwakho akufanele kuqondane nosuku olunzima kakhulu esikhathini sakho.
Uma umuntu opha kakhulu kungaba yinkinga ukuhumusha leyo miphumela, uDkt Minkin uyachaza.
Ngokuqondene nezindleko, i-Affordable Care Act igunyaza lokho ukunakekelwa kokuvikela izivivinyo ezinjalo zabesifazane abampofu zimbozwa ngokugcwele yizinhlelo eziningi zomshuwalense wezempilo . Lokho kusho ukuthi azikho izindleko eziphuma ephaketheni kuwe, inqobo nje uma unomshuwalense. Uma u ungenzi ube nomshuwalense wezempilo, izindleko zizoncika ekutheni ubona bani nokuthi yiziphi izinhlobo zokuhlolwa oku-odwa. Uma ungakwazi ukukhokhela ukuhlolwa kwakho, ukuhlolwa komdlavuza kwamahhala kuyatholakala ngoHlelo Lukazwelonke Lokuthola Ukuthola Umdlavuza Webele kanye Nomlomo Wesibeletho Kusenesikhathi . Umzali Ohleliwe uphinde unikeze izivivinyo eziphansi noma ezingekho izindleko kulabo abafanelekayo , kanjalo.
Kungani ngidinga ukuhlolwa komuntu wesifazane omuhle?
Kuthiwani uma ujabulile ngendlela yakho yokulawula ukubeletha, unezikhathi ezijwayelekile, ungahleleli ukukhulelwa nganoma yisiphi isikhathi maduzane, futhi awutholi okungajwayelekile noma okuphathelene nezimpawu? Ingabe namanje udinga izivivinyo ezijwayelekile zabesifazane kahle? Yebo. UMnyango Wezempilo kanye Nezinsizakalo Zabantu e-U.S. Uncoma ukuthi bonke abesifazane bazithole minyaka yonke .
Ngeke udinge zonke izingxenye zokuhlolwa kukho konke ukuvakasha, noma kunjalo. Abesifazane abangaphansi kweminyaka engama-21, ngokwesibonelo abadingi nhlobo i-Pap smear, kusho uDkt Minkin. Ngokunjalo nabesifazane abaningi abangaphezu kweminyaka engama-60, kusho uGarbus. I- I-U.S. Preventive Services Task Force incoma abesifazane bathola ama-Pap smear njalo eminyakeni emithathu kuya kwemihlanu. Imvamisa yokuhlolwa kwepelvic iyahlukahluka kuye ngomhlinzeki kanye nezidingo zesiguli, futhi ukuhlolwa kwe-STI kanye nemithi yokugoma inikezwa ngokwamacala (kuya ngezidingo zesiguli ngesikhathi sokuvakasha).
Ngaphezu kwalokho, izivivinyo zabesifazane kahle azidingeki kwabesifazane abangaphansi kweminyaka engu-18, yize labo abenza ucansi noma abahlangabezana nezikhathi ezibuhlungu (noma ezinye eziphathelene nezimpawu) kufanele babone umhlinzeki ngokushesha. Abesifazane asebefinyelele esikhathini sokuya esikhathini kufanele baqhubeke nezivivinyo zabo zaminyaka yonke zabesifazane abahle, futhi. Umqondo, kusho uGarbus, ukuvimbela izinkinga ukuthi zenzeke nokuthola izinkinga ezikhona kusenesikhathi.
Okuningi kwalokhu, kwesinye isikhathi, kungazizwa kuyinto ejwayelekile, usho kanjalo. Kepha [esivivinyweni] singangena ezintweni eziningi ezingakhuphuka ngomgwaqo.
Kuphephile yini ukuphuza amaphilisi ezinhlungu othengisayo ngotshwala?
Ingabe uzilungele izindleko zezempilo lapho usuthathe umhlalaphansi?
ungayisebenzisa yini i-pepto bismol ngenkathi ukhulelwe
kulungile ukuthatha i-800mg ye-ibuprofen
isibhamu sedepho sisebenza nini
ungasusa kanjani i-hangover encane
Ngingathatha i-magnesium citrate ne-levothyroxine